Sida loo Download Videos la dhaqsaha badan YouTube Downloader Alternative
> Resource > YouTube > sida dhaqsaha badan YouTube Downloader Alternative: Download Online Video Si fudud
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto sabab loo walwalo, sida aanu doonayno in aad soo bandhigto mid ka mid ah kale ugu wanaagsan ee dhaqsaha badan YouTube Downloader - Wondershare AllMyTube . Wondershare AllMyTube Ma aha oo kaliya jaban, laakiin sidoo kale awooda badan marka loo eego tartanka. Waxay kaa caawinaysaa inaad kala soo baxdo mid videos in ka badan 100 websites video qaybsiga sida YouTube, vimeo, Facebook, DailyMotion, Metacafe, iwm Marka laga reebo isagoo interface ah aan xuduud lahayn oo loogu talagalay ah navigation buuxdhaafay fudud ee codsiga, waxay bixisaa si ay u soo bixi wax kasta oo videos kaliya click hal. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay bixisaa khiyaar ah si loogu badalo videos aad soo bixi in qaab kasta oo caan ah sida MP4, FLV, AVI, Mpg, regelingen, M4A, AAC, iwm iyo sidoo kale hab si loogu badalo qaab aad video ee wax soo saarka si toos ah sida ay aaladaha aad la qaadi karo sida iPod, iPad ama iPhone.
Download videos iyo Cajalado ka goobaha la wadaago 100 video sida YouTube, DailyMotion, vimeo, Hulu, iwm
Waxaad Macdan karo iyo badalo videos galay ku dhowaad dhammaan caanka ah qaabab si loo waafajiyo qalabka la qaadi karo si aad sida AAC, AC3, daanyeer, ASF, AVI, DV, M4A, M4V, MOV, MP3, MP4, Mpg, OGG, regelingen, WMA, wmv, iwm
Waxaa downloads videos 3 jeer ka dhakhsi badan tartanka.
Waxay bixisaa One-click download iyo xarun diinta.
Waxay ka caawisaa si loogu badalo aad videos in qaab kasta oo qalabka la qaadi karo sida iPod Touch 5, iPhone 5, iPad mini & iPad 4, telefoonada Android oo kiniin ah, Mobile Phones (3GP), PSP, Apple TV, Madaxweyne Siilaanyo, iwm
Software waxay leedahay ciyaaryahan video ee loo dhisay.
In kaliya 3 talaabooyin fudud oo si sahlan qof kala soo bixi kartaa oo aanay u videos la software this. Tallaabooyinka saxda ah waxaa hoos hoos ku qoran;
Marka hore waxaad u baahan tahay in ay doortaan video aad rabto in aad kala soo bixi. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa browser isku dhafan ee loo dhisay gudaha biraawsarkaaga software ama isticmaalka sida IE, Firefox ama Chrome si ay u helaan video aad rabto in aad kala soo bixi.
Marka video la soo xulay loo siiyaa biraawsarkaaga, ha ciyaaro. Haddaba waad arki doontaa a D ownload button laga heli karaa dhinaca kore ee midigta ah ee video. Si fudud riix badhanka iyo codsiga si toos ah u bilaabi doonaan in ay soo bixi video ah.
Haddii kale, waxaad si fudud u nuqul ka kartaa URL video iyo paste software ah adigoo gujinaya o ah URL paste button. Button waxaa lagu heli karaa geeska bidixda ah ee kore ee codsiga.
Daawashada iyo wadaaga video via qalabka la qaadi karo si aad sida iPhone waa wax qabow maalmahan. Wixii video ah in ay socon in qalab aad, aad u baahan tahay si loogu badalo in ay qaab. Si tan loo sameeyo, dooro video ka dhameysatay maktabadda iyo guji badalo button ee kooxda gacanta midig ee ugu shishaysa. Markaas waxaad dooran kartaa qaab kasta ama magaca qalabka ku jira oo aad rabto in aad video in lagu wareejiyo. Ka dib markii in, codsiga bilaaban doono diinta aad video.
Marka bixi iyo badaley, aad si fudud u awoodi karaa inuu wareejiyo video ah in aad telefoon Android ama qalab kale oo la qaadi karo, waayo, daawashada iyo in lala wadaago dadka kale. U egtahay wax sahlan, sax? Video oo markaas iyaga diinta si ay u fushadaan qalab aad ma noqon karo fudud dambe. Sidaas waxa dib aad u haysta? Midhadh version tijaabo ah Wondershare AllMyTube hadda oo wuxuu ku raaxaysan aad videos waqti kasta iyo meel kasta.